एक मूल घन्टी सिर्जना गर्न विचार चाँदीका सिक्काहरू निकोलस Heckmann स्वामित्वमा। उहाँले हथौडा माथि एक्लै लिए र आफ्नो प्रिय लागि यस्तो सहायक सिर्जना गरियो। त्यो उनको सबै नातेदार रूपमा तथापि, प्रभावित भएको थियो। सार्वभौमिक उहाँले आफ्नो सिर्जना सुधार थियो भनेर प्रेरित निकोलस प्रशंसा र फलस्वरूप मूल चाँदी छल्ले को एक श्रृंखला उत्पादन भएको छ, तर त्यसपछि आफ्नो काम रोकियो। मिति, यो काम आफ्नो प्रिय प्रत्येक लागि गर्न सकिन्छ। Improvised घन्टी ठूलो आश्चर्य हुनेछ, किनभने तपाईंको आफ्नै हात द्वारा बनाएको छ कि सबैभन्दा बहुमूल्य।
सिक्का को घन्टी बनाउन क्रममा के आवश्यक छ?
सबै को पहिलो तपाईंले प्लास्टिक हथौडा, बोल्ट, ड्रिल, वा प्वाल बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ कि कुनै पनि अन्य उपकरण आवश्यक छ। यो उदाहरणका लागि एक विशेष उपकरण, हुन सक्छ। जो तपाईं सुविधाजनक छ प्रयोग गर्नुहोस्। स्यान्डपेपर तयार Glossing। यो सजिला मा मुख्य काम पूरा भएपछि आउनेछ।
को घन्टी लागि सिक्का कसरी चयन गर्ने?
यो केही खास आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। मुख्य विशेषताहरु:
पीतल, चाँदी, चरेस, र इस्पात मानव स्वास्थ्य एक जोखिम खडा गर्दैन। किन यी सामाग्री प्राथमिकता दिइएको पर्छ भनेर हो। तामा र निकल छाला रोग र विषाक्तता जीव उत्पन्न हुन सक्छ।
आकार आफ्नो ध्यान। 1 रुबल को संप्रदाय मा सानो सिक्का, स्पष्ट फिट छैन।
पहिलो चरण: यस घन्टी नै बनाउन
सुरु गर्न, तपाईं घन्टी गर्नेछ के सिक्का देखि निर्णय। उत्कृष्ट सामाग्री चाँदी बन्नेछ। यो लचीला हुन्छ भनेर त्यसपछि, यो तातो गरम, तर ताप तापमान मा सजिलो छैन। अन्यथा, सिक्का विकृत छ, र केही तत्व greased। त्यो एक म्याजेन्टा रङ्ग बन्न र अलिकति थियो पछि, सेतो जोडले चिसो पानी मा कम गर्दछ। यो बिन्दुमा, तपाईं एक hissing ध्वनि सुन्न। चिन्ता नगर्नुहोस् - यो सामान्य हो।
हामी आफ्नै हातले सिक्का को घन्टी बनाउन ठोस काम गर्न बारी। को ड्रिल एउटा प्वाल कटौती गर्न। यो चिल्लो छ कि हेरविचार। यो बडा यो छ, पतली को घन्टी, तर यो ज्यादा छैन। अन्यथा, सिक्का फुट्छ हुन सक्छ।
तपाईं प्वाल गरेका छन् क्षेत्र, तपाईं एक हथौडा र प्लास्टिक बोल्ट, तपाईं इच्छित आकार चयन गर्नुहोस् र सिर्जना गर्न कोर्न सक्छन् जो मार्फत आवश्यक छ। यो उपकरण टिप गर्न आधार देखि विस्तार एक धातु छडी जस्तै छ। बोल्ट मा सिक्का लगाउने र, यो stretching चिकना हथौडा घन्टी कम। यो एक धेरै laborious प्रक्रिया छ। बिस्तारै उत्पादन मा दस्तक गर्न प्रयास गर्नुहोस्, वा यसलाई विकृत हुन सक्छ। तपाईं इच्छित घन्टी आकार बिस्तारै यसलाई ल्याउन। रिजेल star name मा अंकन विशेष छ। तपाईं एक निश्चित स्तर पुग्न गर्दा, घन्टी हटाउन।
थाहा आवश्यक छ कि?
सिक्का घन्टी को निर्माण गर्न एक प्लास्टिक हथौडा प्रयोग गर्न मात्र आवश्यक छ। तपाईं एक धातु लिन भने, तपाईं एक सिक्का को सानो तत्व हानिकारक जोखिम। तदनुसार, उत्पादन को असमान सतह पनि स्यान्डपेपर संग उपचार पछि, प्राप्त।
सिक्का घन्टी को निर्माण सजिलो छैन, तर तपाईं नियम पालना भने, तपाईं पक्कै पनि सफल हुनेछ। त्यहाँ अर्को धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई हटाउन र बोल्ट खोल्न कि आफ्नो उत्पादन समय समयमा konusovatuyu फारम खरिद छैन। यो पहिलो नजर मा देखिन्छ रूपमा आवश्यक आकार रूपमा सजिलो छैन टिप्न किनभने यो, मुश्किल भाग हो। बाहिर सेट निर्देशनहरू ध्यान दिएर पालन, र तपाईं पक्कै पनि सिक्का घन्टी को गर्न सक्षम हुनेछ।
तपाईं बोल्ट संग उत्पादन हटाउन गर्दा, कि यो सोचो छैन त कस्नु गर्न संडसी वा संडसी प्रयोग गर्नुहोस्।
तातो चाँदी वा धातु संग काम गर्दा तपाईं जलाए रही जोखिम चलाउन किनभने, विशेष पन्जा लगाउने निश्चित हुन। यसलाई निर्माण को पहिलो चरण, जब तपाईं ड्रिल काम, यो आवश्यक लगाउने छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ सुरक्षा चश्मा वा अनुहार ढाल। अनुसार सबै सुरक्षा नियमहरु संग स्थानीय आफ्नो काम सुसज्जित। तपाईं सिक्का मा प्वालहरू गर्दा, तालिका hardboard एक पाना छोप।
एक सिक्का घन्टी राम्ररी विनिर्माण प्रक्रिया परिचित हुनुपर्छ कसरी बनाउने सोच। यस लेखमा निर्देशनहरू विस्तृत। हामी भने छ रूपमा, काम को सबै भन्दा कठिन चरण फारम सिर्जना गर्न छ। पीस नै - एक भन्दा रमाइलो प्रक्रिया। को घन्टी तयार हुँदा, तपाईं आफ्नो श्रम को फल प्रशस्त आनन्द उठाउन सक्छौं। यो चमक दिन र अतिरिक्त भूसी बन्द मिलाउ मात्र रहनेछ।
चम्कने सिर्जना र सौन्दर्य ल्याउँछ
को घन्टी एक चिल्लो सतह प्राप्त गर्न, तपाईंले केही दर्जन साधारण चम्चा स्ट्रोक बनाउन सक्छ। तिनीहरूले अन्यथा तपाईं घन्टी deforming जोखिम चलाउन, प्रकाश हुनुपर्छ। यसलाई थप पनि, बाहिरी कमीकमजोरी हटाउन स्यान्डपेपर वा बिजुली विशेष उपकरण प्रयोग गर्न। को घन्टी को सतह, फोटो जो तपाईं तल हेर्न सक्नुहुन्छ एक पलिश नजर प्राप्त।
एक ठूलो अनाज र कुनै न कुनै: यो त्यहाँ पलिश लागि उपकरण धेरै प्रकार हो उल्लेख गर्नुपर्छ। तपाईं सबैभन्दा मिल्दो के चयन गर्नुहोस्।
विनिर्माण विधि, यस लेखमा प्रयोग गरिन्छ, एकदम जटिल छ, तर परिणाम वर्ष लागि प्रसन्न हुनेछ सिद्ध उत्पादन हो। पलिश पछि, तपाईं एउटा सुन्दर घन्टी कुँदिएका वा मूल ढाँचा सजाउनु गर्न सक्नुहुन्छ। तर, आफ्नो काम को परिणाम प्रयास मा निर्भर गर्दछ।
आफ्नो कार्यप्रवाह कसरी व्यवस्थित गर्ने?
यो तपाईं आफ्नो औँलामा सबै हुनेछ जहाँ कार्यशाला, तयार गर्न आवश्यक छ। नरम मिश्र धातु minted सिक्का भौतिक रूपमा चयन गर्नुहोस्। को प्रिपेरेटरी प्रक्रिया सीधा काम नै भन्दा कुनै कम महत्त्वपूर्ण छ किनभने सधैं, यो सम्झना।
के अन्य प्रविधी घन्टी देखि सिक्का बनाउन प्रयोग? जानिन्छ, धेरै विधिहरू। दोस्रो वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो तपाईं को किनारा मा एक सिक्का राख्नु र कुनै पनि फारम कवर गर्न आवश्यक भन्ने तथ्यलाई सुरु हुन्छ। यो गर्न, एक साधारण चम्चा फिट। यो निर्माण विधि सिक्का छैन पगाल्न आवश्यक छ कि मा अघिल्लो भिन्न हुन्छ। यो एक हथौडा संग भारी blows inflicting को जोडना समतल गर्न आवश्यक छ। यसलाई समान किनारा प्रक्रिया छ। समय समयमा के भयो देखो। सिक्का किनारा राउण्ड भएपछि, प्वाल drilled, तर पूर्ण। यसलाई माध्यम बित्दै अघि ड्रिल रोक्नुहोस्। त्यसपछि स्यान्डपेपर को भित्री व्यवहार र बाहिरी सतह व्यवहार गर्छन्।
सही घन्टी कसरी बनाउने? को घर्षण संरचना लिन र ऊतक को एक सानो टुक्रा यसलाई लागू हुन्छ। एक समाप्त दर्पण हासिल गर्न धेरै पटक सखाप पर्दैन। कि पछि, कब्जा तयार जो तपाईं दृढ आफ्नो हातमा एउटा सिक्का पकड गर्न सक्छन् कारण। यसलाई आफ्नो ओठ घुमेको थिए आवश्यक छ। यो निशाना र खराब खरोंच देखि सुरक्षा प्रदान गर्नेछ। पनि रबर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, महसुस वा कागज समर्थन (कुनै पनि नरम सामाग्री)।
अर्को चरण - केन्द्र मा प्वाल मा वृद्धि। कि ड्रिल तल छेउमा सारिएको छैन सुनिश्चित गर्न नजिकबाट हेर्न, अन्यथा गरेको सबै काम केही गर्न आउनेछ। यो चरण मा यो धैर्य गर्न आवश्यक छ। श्रमसाध्य र सावधान आन्दोलनहरु को घन्टी को मंडल जोड दिइएको छ। तपाईंले आवश्यक घन्टी आकार गरेका छन्, तपाईं एक घर्षण रोलर को भित्र रेखामा आवश्यक छ।
सिक्का को घन्टी सिर्जना - पर्याप्त श्रमसाध्य प्रक्रिया। यो सटिक आन्दोलनहरु आवश्यक र निर्देशनहरूको पालना गर्नुहोस्। प्रविधिलाई ठूलो भीड अवस्थित छ। तपाईं को निर्माण को लागि विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, एक कस्नु रूपमा नरम सामाग्री तिनीहरूलाई लपेटन, पारंपरिक संडसी लाग्न सक्छ। यो उत्पादन को सतह बिगार्न छैन। पलिश लागि पनि प्रक्रिया सरल हुनेछ फरक मिसिन को धेरै छ।
सिक्का को घन्टी - मूल र रोमान्टिक उपहार। कुनै पनि केटी यस्तो इशारा कदर हुनेछ।
कसरी रूख बाहिर एक बन्दूक बनाउने? आफ्नो छोराछोरीको लागि ठूलो उपहार सिर्जना
आफ्नो हातले ओछ्यानमा फ्रेम
कोइला स्तम्भ: तपाईंको आफ्नै हातमा कसरी बनाउने
घरमा मोटर कवच कसरी जाँच गर्ने?
तपाईंलाई आश्चर्य हुनेछ जो शो "Thrones को खेल", 10 तथ्य
काठ लागि कोल्हू: आफ्नै हात एक धेरै नै सरल बनाउन
"Derways आकर्षक" (Derways औरोरा): वर्णन, विनिर्देशों, समीक्षा